Waa'ee pireezidaantii duraanii Girmaa Waldagiyoorgis kana beektuu? - BBC News Afaan Oromoo
Sirni awwaalchaa pireezidaantii duraanii Itoophiyaa Girmaa Waldagoorgis bataskaan Qidist Sillaasee Kaatedaraalaatti har'a raawwateera.
Sirna awwaalchaa isaanii irrattis maatiifi dinqisiifattoota isaanii dabalatee pireezadantii biyyattii Saahaalworq Zawudee, ministeera mummee Dr Abiy Ahimad fi kan duraanii obbo Haayilemaariyaam Dassaalanyfi qondaaltooti mootummaa biroo illee argamaniiru.
Pireezidantiin FDRI Saahileworq Zawudee, galma Miliiniyeemiitti ergaa gaggeessaa pireezidantii duraanii irratti dabarsaniin akkas jedhan:
''Har'a asitti kan walitti qabamneef, gaaf tokko seenaan biyya keenyaa wayita barreeffamutti, jabana keenya keessatti hooggantoota biyyi keenyi qabdi jedhamee kan maqaan isaanii leellifamu pireezidant Girmaa W/Giyoorgis gaggeessuuf.''
Pireezidant Girmaan eenyu?
Mudde 19 bara 1917 magaalaa Finfinneetti dhalatan. Bara mootummaa Haayile Sillaasee keessa loltuu lafoo irraa hanga ajajaa dhibbaatti hojjetaniiru.
Bara 1953 A.L.I miseensa Paarlaamaa kan tahan. Yaa'ii paarlaamaa Addunyaa bara 1952 irratti itti aanaa dura ta'aa pirezedaantii ta'uudhaan garee biyya isaanii gaggeessaniiru.
Mootummaa Dargii keessatti ammoo rakkoo Ertiraa karaa nagaa furuudhaaf Komishinii hundeeffame keessatti Komishinara ta'uudhaan hedduu dhama'uu isaanii warri isaan beekan ni dubbatu.
Pirezedaantii Fannoo Dimmaa Ertiraas turan.
Obbo Girmaan biyya keessaa Afaan Oromoo, Afaan Amhaaraafi Afaan Tigiree biyya alaa keessaa ammoo Afaan Xaaliyaanii, Afaan Ingliliziifi Afaan Firansaay dubbatu.
Bara 1994 hanga 2006 ammoo Pirezidaantii Itoophiyaa ta'anii waggaa 12f tajaajilaniiru.
Obbo Girmaan dhaabbilee garaagaraa hundeessuufi gaggeessuudhaanis maqaa gaarii qabu.
Quuqama kunuunsa naannoo adda ta'e qabu kan jedhaman pirezedaantii duraanii kun waldaa 'Lam La Itoophiyaa' jedhamu kunuunsa naannoo irratti hojjetuuf Pirezedaantii ta'uun tajaajilaniiru.
Bara 1995 Baankiin Ijaa akka hundeeffamu taasisuudhaan ga'ee guddaa kan qaban Obbo Girmaan agartuu ija isaanii kennuudhaanis Itoophiyaatti nama jalqabaa ta'aniiru.
Michooti isaanii maal jedhu?
Waggaa shaniif barreessitu Pireezidaant Girmaa kan turte Natsaannat Woldemikaa'eel "Isaan nama adda ta'anidha. Akkasi jettee ibsuu hin dandeessu. Nama baayyee kabajamoodha, "jetti.
Nama rakkataaf yaaduufi eebbifamoo, keessummaayyuu dargaggoonni akka guddataniif baayyee kan yaalaniifi nama gorsaniidha jechuun Pireezidaant Girmaa ibsiteetti.
B/Jeneral Wasihuun Nigaatu yeroo Pireezdant Girmaa loltuu waraana Itoophiyaa turaniitti walbeeku.
"Pireezidaant Girmaa Itoophiyaa kan tajaajilan akka prizidaantiii qofaatti utuu hin taane akka looltus tahaniitu," jedhu.
Mana baruumsa waraanaa mooti Haaylesillaasee keessaa koorsii 7ffaa keessa turani. Achiirraa humna qilleensa keessa galanii tajaajilaaniru jedhu.
"Yeroo paarlamaaf filatamanitti waggaa 36 akka ta'anin akka pireezdaantii gaggeessaa seeratti tajaajilaa turani," jedhu.
Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa kora kaleessa (Kibxata) taa'een boqochuu pirezidaantii duraanii Obbo Girmaa W/ Giyoorgis hordofee har'i (Roobiin) guyyaa guutuu naannoolee biyyittii hundaa fi bulchiinsota magaalaa lamaan, Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti alaabaan biyyittii gadi siquun mirmirfamee akka oolu murteessuun isaa ni yaadatama.
Oggantoota addunyaa keenyaa: Eelan Jonsanii hanga Saahilawarqi Zawudeetti